करोड ठगी गरेका रुसिल कटुवाल पक्राउ, केपी ओली र महेश बस्नेत नै संरक्षक ! – Kantipur Np
करोड ठगी गरेका रुसिल कटुवाल पक्राउ, केपी ओली र महेश बस्नेत नै संरक्षक !
प्रकाशित मिति: बुधबार, भाद्र ३०, २०७८ समय: १७:११:०३
झन्डै एक करोड ठगी आरोपमा युवा संघका केन्द्रीय सदस्य रुसिल कटुवाल पक्राउ परेका छन ।
कटुवालको नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महेश बस्नेतसंग राम्रो मात्र नभएर घनिष्ठ सम्बन्ध गरेको जानकारहरु बताउँने गरेका छन ।
उनले करिब ७ वर्ष अघि नै केपी शर्मा ओली र महेश बस्नेतसंग खिचेका थिए जुन फोटो अहिले सामाजिक संञ्जालमा भाईरल नै भइरहेको छ ।
कतिपयले त केपी शर्मा ओली र महेश बस्नेतसंगको सम्बन्धलाई दुरप्रयोग गरेको भन्ने टिप्पणी समेत गर्ने गरका छन ।
नेकपा एमालेका युवा नेता महेश बस्नेतको नाममा हप्ता असुली गर्ने गर्ने गरेको स्रोत बताउँछ ।
युवा संघकी पूर्व अध्यक्ष निरुपालको धर्म भाई समेत रहेका रुमेश कट्वाललाई महानगरीय प्रहरी अपराध महासाखाले पक्राउ गरेको हो । तर, उनको वास्तविक नाम भने रुसिल कटुवाल रहेको प्रहरीले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पक्राउ परेका कट्वाल पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग समेत निकट रहेका छन् । उनलाई जग्गा सम्बन्धी ठगीमा पक्राउ गरिएको हो ।
सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका ९ स्थायी भर भई काठमाडौंको वडा नम्बर ३२ मा बस्दै अँएका रुसिल कटुवाल र मोरङको केराबारी गाउँपालिका वडा नमबर ६ स्थायी घर भई काठमाडौं बस्दै आएका धिरज कुमार दाहालले नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिका २ घर भई काठमाडौंको सुकेधारा बस्ने उद्धव प्रसाद अधिकारीलाई ठगी गरेका हुन् ।
धिरजको नाममा रहेको मोरङको केराबारी गाविस वडा नमबर ६ (क) को कित्ता नम्बर ६ सय ३८ को एक आना र कित्ता नम्बर ६४० को ७ आना २ पैसा जग्गा विक्री गर्नका लागि बैना बापत नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको बत्तिस पुतली शाखाबाट ६८ लाख रुपैयाँ निकालेका थिए ।
तर जग्गा विक्री गर्नुको सट्टा सम्पर्क विहिन भएपछि पीडितले सोधी खोजी गर्न थाले । गत वर्ष असार २० गते मालपोत कार्यालय मोरङमा गएर बुझ्दा उक्त जग्गाहरु बिक्री भइसकेको पाइएको थियो ।
सोही ठगी अभियोगमा प्रहरीले रुसीललाई पक्राउ गरेको हो । अर्का ठग धिरजलाई भने खोजी कार्य भइरहेको अपराध महासाखाले बताएको छ ।
Last Updated on: September 15th, 2021 at 5:11 pm